Dowlada South Kuuriya oo Lacag ku bixineysa la dagaalanka Burcad badeeda Soomaalida – SBC
Dowlada South Kuuriya oo Lacag ku bixineysa la dagaalanka Burcad badeeda Soomaalida
Seoul- Dowlada Kuunfurta Kuuriya ayaa Lacag gaareysa $ 500,000 oo dollar waxaa ay ugu deeqday Barnaamijka la dagaalanka burcad badeeda Soomaalida si wax looga qabto howlgalada Burcada badda.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Koonfurta Kuuriya ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Dalkiisa in ay dowladooda lacagta malaayiinta Dollar ah ee ay bixineyso ay ula jeedo sidoo loo kabi lahaa Sanduuqa Dhaqaalaha loogu uruurinayo La dagaalanka Burcad badeeda Soomaalida kaasi oo lagu sameeyay Shirkii ka dhacay Magaalada Dubia ee Iskutaga Imaaraadka Arabta.
Ergeyga Dowlada Seoul uga Qeybgalay Kulankaas Moon Ha-yong ayaa waxaa uu sheegay In lacagta at dowladoodu ku deeqday lagu balaarin doono howlglada lagula dagalamyo burcad badeeda isaga oo sheegay in sanduuqa lacag uruurinta ee qaramada midoobay sababta loo sameeyay ay ahayd inay sameeyaan Goobo lagu maxkamadeeyo Burcad badeeda Soomaalida & Xabsiyo lagu hayo oo laga dhiso wadanka Soomaaliya.
Hadalka Dowlada Koonfurta Kuuriya ayaa imaanaya xilli Maalmo ka hor burcad badeeda Soomaalida uu si dirqi ah uga badbaaday Markab ganacsi oo dalkaasi laga leeyahay kaasi oo marayay biyaha badweynta Hindiya.
Dowlada Koonfur kuuriya waxay ka mid tahay dowladaha Dagaalka Adag kula jira Burcad badeeda Soomaalida bishii January ayay ahayd markii ciidamada Comandoska ah ee Wadankaasi ay si xoog ah ku so furteen markab dalkooda laga leeyahay iga oo ku dilay 8 nin oo soomaali burcad badeed ah shan kalena nolol ku qabtay kuwaasi oo la maxkamadeyn doono Bisha soo socota.
Mohamed Dek Abdalla